अमेरिकामा ७० वर्षपछि एकजना महिला कैदीलाई मृत्युदण्ड दिइने - Everest Dainik - News from Nepal
अमेरिकामा ७० वर्षपछि एकजना महिला कैदीलाई मृत्युदण्ड दिइने
संयुक्त राज्य अमेरिकामा झण्डै ७० वर्षपछि एकजना महिला कैदीलाई मृत्युदण्ड दिन लागिएको त्यहाँको न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ।
उनलाई डिसेम्बर ८ का दिन इन्डियानामा प्राणघातक सुई लगाइने भएको छ।
मृत्युदण्डसम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्ने केन्द्र ‘डेथ पेनाल्टी इन्फर्मेशन सेन्टर’का अनुसार यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाले बनी हेडीलाई मिसोरीमा सन् १९५३ मा मृत्युदण्ड दिएको थियो।
दुई जना मन्त्रीहरूको हत्या गरेका ब्र्यान्डन बर्नार्डलाई पनि डिसेम्बरमा मृत्युदण्ड दिने तय गरिएको छ।
अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता विलियम बारले भने , “ती अपराधहरू जघन्य थिए।”
ट्रम्प प्रशासनले गतवर्ष मृत्युदण्ड पुन: शुरू गर्ने बताएको थियो।
लिसा मन्टगमरी को हुन्?
याे पनि पढ्नुस यमनमा ४ पत्रकारलाई मृत्युदण्डको सजाय
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “घरभित्र पुगेपछि मन्टगमरीले आठ महिनाकी गर्भवती स्टिनेटमाथि आक्रमण गरिन् र बेहोस बनाइन्।”
“त्यसपछि भान्छामा प्रयोग गर्ने चक्कु प्रयोग गरेर स्टिनेटको पेट चिरिन्। त्यसो गर्दैगर्दा स्टिनेटको होस फर्क्यो। त्यसपछिको सङ्घर्षमा स्टिनेट मारिइन्। त्यसपछि मन्टगमरी पेटको बच्चा झिकेर आफ्नै बच्चा हो भन्ने प्रयत्नमा लागिन्।”
याे पनि पढ्नुस निर्भया बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई मृत्युदण्ड फेरि रोकियो
सङ्घीय र राज्यस्तरीय मृत्युदण्ड- के फरक छ?
मुद्राको अपचलन र वा चिठीपत्र चोरी स्वत: सङ्घीय तहमा मुद्दा चलाइन्छ। अरू अपराधको चाहिँ प्रकृति हेरेर सङ्घीय तहमा लगिन्छ।
सन् १९७६ को सर्वोच्च अदालतको अर्को निर्णयले भने राज्यहरूलाई मृत्यु दण्ड पुन:स्थापित गर्ने अनुमति दिएको थियो।
याे पनि पढ्नुस निर्भया काण्डका ४ दोषीको फाँसी फेरि टर्‍यो
‘डेथ पेनाल्टी इन्फरमेशन सेन्टर’ले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९८८ देखि सन् १९१८ सम्ममा ७८ जनालाई मृत्युदण्ड सुनाइएपनि ३ जनामा मात्र मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरियो।
मन्टगमरी र बर्नार्डको मृत्युदण्डसहित यो वर्ष सङ्घीय सरकारले नौ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको हुनेछ।
ट्रम्प प्रशासनले सङ्घीय मृत्युदण्ड रोकिएको लामो समयपछि पुन: शुरू गर्ने बताएको थियो।
त्यसबेला महान्यायाधिवक्ताले भनेका थिए, “दुवै पार्टीको प्रशासन भएका बेला न्याय मन्त्रालयले जघन्य अपराधका लागि मृत्यु दण्डबारे निर्णय खोजेको थियो।”
“न्याय मन्त्रालयको काँधमा विधिको शासन कायम गर्ने दायित्व छ र पीडित र पीडितका परिवारका अगाडि हाम्रो न्याय प्रणालीले निर्णय गरे बमोजिमको दण्ड दिइएको अवस्था हुनुपर्छ।।”
ट्याग्स: Lisa montgomery, मृत्युदण्ड